Helitaanka Apple TV 4k oo ah 64 GB ayaa sii socota iyada oo aan hoos loo dhigin | Waxaan ka socdaa mac
Tan iyo markii dib loo cusbooneysiiyay ee horseeday daahfurka jiilka afaraad ee Apple TV, sanduuqa sare ee loo yaqaan 'Apple set-top box' wuxuu noqday mid ka mid ah aaladaha ay aadka u jecel yihiin adeegsadayaashu, adeegsadayaashii horey ugu tiirsanaa tusaalaha jiilka seddexaad iyo kuwa u adeegsaday xusuus qor. Suurtagalnimada in lagu raaxeysan karo ciyaaraha iPhone-ka ee shaashadda weyn ee telefishankeennu waxay ahayd tallaabo weyn oo qalabkan loogu qaaday inuu ka mid noqdo qoyska qalabka Apple. Xilligan Apple waxay iibineysaa nooca jiilka 4-aad oo ay weheliso jiilka 5-aad, aalad la jaan qaadi karta telefishinka 4k. Jiilka shanaad Waxaan helnay laba nooc oo 32 iyo 64 GB ah, laakiin kan dambe ayaa umuuqda inuu noqday wax ka baddan badeecado naadir ah.
Ficil ahaan tan iyo markii la bilaabay, 5-ka jiilka 64-aad ee XNUMX-aad ee Apple TV wuxuu noqday aalad ay aad u yar ku faani karaan midkood inuu yeesho ama uu meel fog ka arkay, tan iyo waqtigii maraakiibta si loogu helo qalabkan si raaxo leh gurigeena. waxaa laga bilaabayaa 4 ilaa 5 toddobaad, waqti aad u sarreeya dalabka suurtagalka ah ee qaabkani yeelan karo.
Waa in la xusuusnaado in nooca 64 GB ee jiilka 4aad ee Apple TV uusan qabin dhibaatooyinkan helitaanka, laga yaabee maxaa yeelay dadka isticmaala ma aysan doorin qaabkan oo leh awood ballaaran oo adeegsi iyo xaddidaadaha ay soo bandhigtay qalabkan, oo qasbi karay shirkadda ku saleysan Cupertino in ay yareeyo tirada aaladaha lagu soo saaray awooddan, markaa waqtiga dhalmada si xad dhaaf ah ayuu u sarreeyaa.
Haa, xitaa sidaas, waad iska cadahay in hadiyadaada boqorradu tahay nooca 64 GB, Waxa ugu fiican ayaa ah inaad codsato toddobaadkan, si loogu helo Kirismaska ​​xoogaa nasiib ah, maxaa yeelay ma jiro wax dhaqdhaqaaq ah oo tilmaamaya yareynta suurtagalka ah ee waqtiga dhoofinta ee qaabkan gaarka ah. Waqtigan xaadirka ah, helitaanka jiilka 4aad ee 32GB iyo nooca jiilka 5aad ee isku awood ayaa ah isla markiiba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » 4GB Apple TV 64k Helitaanka Weli Lama Yarayn
Ku beddel jihada USB-C 3.1 dekedda MacBook-kaaga adabtaradan